1 KỌRINT 14 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1KỌR 14)
1 KỌRINT 14
Ka ịhụ mmadụ ibe unu nꞌanya bụrụ ihe na-agụsi unu agụụ ike. Rịọkwanụ Chineke ka o nye unu onyinye nke Mmụọ Nsọ ya na-enye, nke ka nke, onyinye ibu amụma, ka unu nwee ike ikwusa ozi ọma Chineke.
Ọ bụrụ na onyinye i nwere bụ onyinye ịsụ asụsụ nke i na-amụghị amụ, cheta na ọ bụ nanị Chineke ka ị na-agwa okwu, nꞌihi na ọ dịghị onye na-aghọta ihe ị na-ekwu. Okwu ị na-ekwu ga-abụ site nꞌike Mmụọ Nsọ, ma ha nile bụ ihe mmadụ na-aghọtaghị.
Ya mere, nwoke ahụ na-ezisa ozi ọma na-enyere chọọchị nile aka ito eto nꞌime mmụọ, ma nwoke ahụ na-asụ asụsụ ọzọ, na-enyere nanị onwe ya aka.
Ọ gaara atọ m ụtọ ma a sị na unu nile nwere onyinye ịsụ asụsụ dị iche iche, ma ọ ga-atọ m karịa ma ọ bụrụ na unu nile enwee onyinye izisa ozi ọma. Nke a bụ nꞌihi na nwoke ahụ na-ezisa ozi ọma bara uru karịa nwoke na-asụ asụsụ dị iche iche. Ịsụ asụsụ ya ga-aba uru ma ọ bụrụ na ọ dị onye na-aghọta ihe ọ na-asụ, onye nwekwara ike ikọwara chọọchị ihe o kwuru.
Ụmụnna m ọ bụrụ na m bịakwutere unu malite ịsụ asụsụ nke unu na-adịghị anụ, olee uru m baara unu? Ọ baghị uru ọ bụla! Kama ọ bụrụ na m ekwuo okwu nꞌụzọ doro anya, banyere ihe Chineke kpughere gosi m, ma ọ bụ ihe nile m maara, ma ọ bụ ihe gaje ime, ma ọ bụ ozizi nke eziokwu Chineke, nke a ọ̀ gaghị abara unu uru?
Ọ bụkwa otu a ka ọ dị nꞌetiti ihe nile na-enweghị ndụ, ma ha bụ ihe na-eme ụzụ dị ka opi, ma ọ bụ ụbọ akwara. O nweghị onye ga-aghọta ihe onye na-afụ opi na-egbu ma ọ bụ ihe onye na-akpọ ụbọ akwara na-akpọ ma ọ bụrụ na ọ maliteghị ya nke ọma.
Ọ bụrụkwa na nwoke na-egbu opi ike egbuzighị ya dị ka o si kwesị, olee otu ndị agha ga-esi mata na agha dị?
Nꞌotu aka ahụ kwa, ọ bụrụ na ị na-agwa mmadụ okwu nꞌasụsụ ọ na-adịghị anụ, olee otu ọ ga-esi ghọta ihe ị na-ekwu? Ịgwa mmadụ okwu otu ahụ dị ka mmadụ ichenye ọnụ nꞌezi na-ekwuru ifufe okwu.
Asụsụ a na-asụ nꞌụwa a dị ukwuu, ma ha nile bara uru nye ndị na-anụ ha.
Ọ bụrụ na mmadụ e jiri otu nꞌime asụsụ ndị a gwa m okwu, aga m abụ ọbịa nꞌebe onye na-asụrụ m asụsụ ahụ m na-adịghị anụ nọ, ya onwe ya ga-abụkwa ọbịa nꞌebe m nọ.
Ebe unu na-achọsi ike inwe onyinye nke Mmụọ Nsọ, chọọnụ onyinye ndị ahụ ga-enyere unu aka iwuli nzukọ Chineke elu.
Ọ bụrụ na Chineke nyere onye ọ bụla onyinye ịsụ asụsụ dị iche iche, ya rịọ Chineke ka o nyekwa ya ike ịkọwa ihe ọ na-ekwu.
Ọ bụrụ na m ji asụsụ dị iche na-ekpe ekpere, mmụọ m ga-eso m na-ekpe ekpere ahụ, ma uche m agaghị aghọta ekpere m na-ekpe.
Ọ bụrụ na ọ dị otu a, olee ihe m ga-eme? Aga m eji mmụọ m kpee ekpere nꞌasụsụ ahụ m na-aghọtaghị jirikwa uche kpee ekpere nꞌasụsụ ahụ m ghọtara. Aga m ejikwa mmụọ m bụọ abụ nꞌasụsụ ahụ m na-aghọtaghị, jirikwa uche m bụọ abụ nꞌasụsụ ahụ m ghọtara, ka m nwee ike ịmata ihe m na-ekwu na ihe m na-abụ nꞌabụ.
Nꞌihi na mgbe i ji asụsụ nke ndị ọzọ na-amaghị na-ekpere Chineke ekpere, olee otu ndị nile nọ nꞌụlọ nzukọ ahụ na-aghọtaghị ihe ị na-ekwu ga-esi zaa Amin?
Ọ bụ ezie na ekpere gị ga-ama mma, ma o nyereghị onye ahụ na-anụghị ya aka.
Ana m ekele Chineke nꞌihi na ana m asụ asụsụ dị iche iche karịa unu nile.
Ma mgbe ọ bụla ndị Kraịst zukọrọ nꞌofufe, ọ na-akara m mma ikwu nanị mkpụrụ okwu ise nke mmadụ nile ga-aghọta na nke ga-abakwara ha uru, karịa na m kwuru puku mkpụrụ okwu iri nꞌasụsụ dị iche nke onye ọ bụla na-apụghị ịghọta.
Ụmụnna m, unu abụla ụmụntakịrị nꞌechiche unu. Bụrụnụ ụmụntakịrị nꞌihe gbasara ime ihe ọjọọ, ma bụrụnụ ndị nwere uche nꞌihe gbasara ụdị okwu a.
E dere ya nꞌakwụkwọ nsọ sị na Chineke ga-eji asụsụ ndị mba ọzọ gwa ndị ya bụ ụmụ Izirel okwu, ma ha agaghị ege ntị.
Nke a na-egosi na ịsụ asụsụ dị iche iche abụghị ihe dị mkpa nye ndị kwere ekwe, kama ọ bụ ihe ịrịba ama nye ndị na-ekweghị ekwe. Ma ibu amụma, nke bụ ikwusa eziokwu Chineke, bụ ihe dị ndị kweere na Kraịst mkpa. Ndị na-ekweghị ekwe anaghị ahụ mkpa nke a dị.
Ọ bụrụ na onye na-ekweghị na Kraịst abata nꞌụlọ chọọchị unu mgbe unu nile ji asụsụ dị iche iche na-ekwu okwu, gịnị ka ọ ga-eche? Ọ̀ gaghị asị na unu nile bụ ndị ara, ndị isi mebiri?
Mgbe ọ ga-anọ na-ege ntị, ihe ọ ga-anụ ga-emekụta echiche nzuzo ya nile, mee ka ndụ ọjọọ ya pụta ìhè. Nke a ga-emekwa ka o gbuo ikpere nꞌala kpọọ isi ala nye Chineke sị, “Nꞌezie, Chineke nọ nꞌetiti unu.”
Ugbu a, ụmụnna m, gịnị bụ isi ihe m na-ekwu? Mgbe ọ bụla unu zukọrọ ife Chineke, ụfọdụ kwesịrị ịbụ abụ, onye ọzọ ga-ezi unu ihe, ma ọ bụ gwa unu ozi dị mkpa Chineke gosiri ya, ma ọ bụ jiri asụsụ nke ọ na-amụghị gwa unu okwu, ka onye ọzọ kọwaa ihe onye ji asụsụ a dị iche kwuo okwu kwuru. Ma ka ihe ọ bụla e mere nꞌime ụlọ chọọchị bụrụ ihe ga-abara onye ọ bụla uru.
A sịkwa na ọ dị ndị chọrọ iji asụsụ dị iche kwuo okwu nꞌime chọọchị, ka mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ kwuo. Kama ka ha kwuo nꞌotu nꞌotu nꞌusoro. Ka onye ga-akọwa ihe ha kwuru nọrọkwa nꞌebe ahụ.
Ọ bụrụ na ọ dịghị onye ga-akọwa ihe ha na-asụ, ka onye ahụ na-asụ asụsụ dị iche mechie ọnụ ya. Ya na Chineke sụrịtaa ya.
Ka mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ nwere onyinye ibu amụma kwuo okwu nꞌotu nꞌotu, mgbe mmadụ nile nọrọ nwayọọ na-ege ha ntị.
Ọ bụrụ na onye ọzọ anata ozi site nꞌaka Chineke, mgbe onye ọzọ na-ekwu okwu, ka onye ahụ natara ozi ahụ chere tutuu onye nke na-ekwu ekwuchaa tupuu o kwuo nke ya.
Chetanụ na onye ahụ Chineke chọrọ isite nꞌọnụ ya kwuo okwu nwere ike iji ndidi chere ruo mgbe o ruru oge nke ya ikwu okwu.
Nꞌihi na Chineke abụghị onye na-achọ ka ihe nile na-aga aghara aghara. Chineke chọrọ ka ihe nile na-aga nꞌusoro nꞌime chọọchị nile nke ndị ya.
Ụmụ nwanyị ekwesịghị ikwu okwu nꞌime chọọchị. Ha ekwesịghị itinye ọnụ na ntụgha ụka ọ bụla, nꞌihi na akwụkwọ nsọ kwuru na ha ga-edo onwe ha nꞌokpuru ụmụ nwoke.
Ọ bụrụ na ọ dị ihe ha chọrọ ịmata, ha jụọ di ha mgbe ha lara nꞌụlọ. Nꞌihi na ọ bụ ihe ihere na nwanyị ga-ekwu okwu nꞌime ọgbakọ chọọchị.
Ùnu jụrụ ịnabata okwu a? Ùnu chere na okwu Chineke malitere nꞌaka unu? Ùnu chekwara na ọ ga-akwụsị nꞌaka unu? Ụgha!
Ọ bụrụ na ọ dị onye na-eche na ya bụ onye amụma, ma ọ bụ na ya nwere onyinye nke Mmụọ Nsọ, nanị ihe m na-achọ ka ọ ghọta bụ na ihe m na-edere unu bụ iwu Onyenwe anyị nꞌonwe ya nyere m.
Ọ bụrụ na ọ dị onye nọgidere jụ ige ntị nꞌihe m kwuru nꞌakwụkwọ a, unu aṅala ya ntị!
Ya mere, ụmụnna m, ka ibu amụma bụrụ ihe na-agụ unu agụụ, ka unu nwee ike ikwusa ozi ọma Chineke nꞌụzọ doro anya. Kama unu akwụsịkwala ndị nwere onyinye ịsụ asụsụ nke ha na-amụghị amụ.
Ma meenụ ihe nile nꞌụzọ dị mma, ka ha dịkwa nꞌusoro.
1 KỌRINT 14:1
1 KỌRINT 14:2
1 KỌRINT 14:4
1 KỌRINT 14:5
1 KỌRINT 14:6
1 KỌRINT 14:7
1 KỌRINT 14:8
1 KỌRINT 14:9
1 KỌRINT 14:10
1 KỌRINT 14:11
1 KỌRINT 14:12
1 KỌRINT 14:13
1 KỌRINT 14:14
1 KỌRINT 14:15
1 KỌRINT 14:16
1 KỌRINT 14:17
1 KỌRINT 14:18
1 KỌRINT 14:19
1 KỌRINT 14:20
1 KỌRINT 14:21
1 KỌRINT 14:22
1 KỌRINT 14:23
1 KỌRINT 14:25
1 KỌRINT 14:26
1 KỌRINT 14:27
1 KỌRINT 14:28
1 KỌRINT 14:29
1 KỌRINT 14:30
1 KỌRINT 14:32
1 KỌRINT 14:33
1 KỌRINT 14:34
1 KỌRINT 14:35
1 KỌRINT 14:36
1 KỌRINT 14:37
1 KỌRINT 14:38
1 KỌRINT 14:39
1 KỌRINT 14:40